1 Blade Kwabesilisa
2 Blade Kwabesilisa
3 Blade Kwabesilisa
4 Blade Kwabesilisa
5 Blade Kwabesilisa
6 Blade Kwabesilisa
1 Blade Kwabesifazane
2 blade Kwabesifazane
3 Blade Kwabesifazane
4 Blade Kwabesifazane
5 Blade Kwabesifazane
I-DOUBLE EDGE BLADE
Ungazithenga kanjani izinsingo ezilahlwayo?
Ngokuya ngekhanda le-razor, lingahlukaniswa libe yizinhlobo ezimbili: ikhanda elilungisiwe nekhanda elihambayo. Ukukhetha okungalungile kwensingo nakho kungadala ukulimala esikhunjeni sobuso, ngakho-ke ukukhetha insingo enhle ekufanele ikhono lokuqala ongalifunda. Okokuqala, ukukhethwa kwekhanda le-razor. 1. Ikhanda lamathuluzi elingaguquki ...
Wayehlala engowesifazane omkhulu kakhulu
Ukhohlwa ukuthi wake waba yinkosazana encane.Manje yisikhathi sokuzinikeza isipho. IGoodMax, ikupakishe ngothando nobuhle.Yinhle njengoba injalo. IGoodMax, ikunikeza okusha sha, okuhlanzekile futhi kujabulise. Namuhla ngizokhuluma ngohlobo lwensingo yabesifazane Ngoba ihlobo ...
Ikhwalithi enhle ngentengo enhle
IDayimane liyabiza kodwa namanje abantu abaningi bayalithenga ngoba lihle, ngesizathu esifanayo, intengo yethu iphakeme kancane kunamanye kepha amaklayenti amaningi asikhetha ukuthi sibe ngumhlinzeki ekugcineni ngenxa yekhwalithi yethu enhle ngemuva kokuqhathanisa intengo nekhwalithi nabanye, futhi yingakho umkhiqizo wethu ungaba ...
Ngabe uzosebenzisa ukhilimu wokushefa ngaphambi kokushefa?
Mngani, Ngingazi ukuthi amadoda asebenzisa insingo enjani? Imanuwali noma ugesi. Ngifunde okuningi ngezinzuzo zensingo ebhaliwe, engagcini nje ngokwenza ubuso bakho ihlanzeke futhi ihlanzeke, kepha futhi eyenza impilo yakho ibe lula futhi ikhululeke kakhudlwana. Yize intshebe kuwuphawu lomuntu ovuthiwe, ...
Ungasivikela kanjani isikhumba sakho ngenkathi ushefa
Ukuqala kosuku kuqala lapho uvuka ugeze, kepha uma ngephutha uzinwaya isikhumba sakho lapho ushefa, kuzoba umuzwa obuhlungu kakhulu. Insingo yangena esikhunjeni ngendlela eyihlazo kakhulu, yasisika futhi yabangela ukopha okungakholeki. Yize sisebenza kanzima ...
Iningi lethu kumele lishefe hhayi indoda kuphela kodwa nelintokazi, umehluko wukuthi indoda ishefa ubuso kanti nenenekazi lishefa umzimba. zombili izinsingo zomquba kanye nezinsingo ze-elekthronikhi, kufanele kube nezinkinga kakhulu noma kancane. namuhla, ake sikhulume ngezinsingo zomquba. Okwezinsingo zomquba, ...
IGOODMAX BLADE RAZOR REVOLUTION
Kunezinhlobo ezimbili zezinsika zokuphepha, enye ukufaka insimbi esika nhlangothi zombili kusiphathi se-blade, kanti enye ukufaka ama-blade amabili anohlangothi olulodwa kulowo ophethe i-blade. Lapho ushefa ngensingo yangaphambili, umsebenzisi udinga ukulungisa i-engeli yokuxhumana phakathi komphetho wentshebe nentshebe ukuqinisekisa ...
Uyisebenzisa kanjani insingo ukuze ilunge ngempela ukushefa
Inqubo efanele yabesilisa yokugunda. Isandulela esingu-1 sokushefa imizuzu emibili. Intshebe inzima kakhulu kunesikhumba, ngakho-ke ukulungiselela ngaphambi kokushefa kubalulekile ukuze kwenziwe ukushefa kube lula futhi kungalimazi isikhumba ekuxabaneni kokushefa. Ithawula elishisayo elingu-1 ebusweni bakho: ungafaka i-h ...
Razors show bukhoma weCanton fair
Ngenxa yeCoivd-19, umnotho waba nomthelela omkhulu. Njengomkhiqizi wensimbi okhokhelwayo, inkampani yethu ———— I-Ningbo Jiali Plastics Co., Ltd ayikwazi ukuya embukisweni we-canton ngo-2021 futhi.Yingakho lapha ngibhalele lezi zindaba abafana bakho. Uhulumeni wethu uthathe isinqumo sokuba nomkhiqizo ...
Luhlobo luni lwensingo esingalunikeza
I-OurcompanyNingboJialiPlasticsCo., Ltd sakhiwe ngobungcweti esikhiqiza izinsingo kusuka ku-blade olulodwa kuya kwayisithupha blade. Kokubili kuyatholakala kwabesilisa nabesifazane, okulahlwayo nohlelo lokuqala. I-razor Rounded cartridge kaLady igona amajika akho enza ukushefa ...
Ungayikhetha kanjani insingo efanelekayo yamantombazane
Ngabe usakhathazwa yiluphi uhlobo lwesipho ongasithumela entombini yakho? zama isitayela esisha nge-GOODMAX razor, bese uyikhetha kanjani i-razor efanelekile kubo noma eyakho, kuzoba nokusikisela okuthile kuwe: Okokuqala kufanele kube ukubukeka. ngoba amantombazane ahlala ebonakala kanjalo ...
Ukusungulwa okukhulu - i-razor blade
Izinsingo ziyizidingo zempilo yansuku zonke hhayi emadodeni kuphela, uyazi ukuthi insingo yasungulwa nini futhi kanjani. Intambo yokuqala yatholakala kusukela eminyakeni eyi-1800 eyedlule. Izinsingo ezindala kakhulu zazenziwe ngetshe lensimbi, ngethusi nangegolide.Abantu baseMelika banikele kakhulu emlandweni wensingo Ngo-1895, iG ...
Ayikho 77 ChangYang Road, JiangBei District, Ningbo, China